Pabrika plastika fikosoham-bary cnc ary mpamatsy | Ouzhan
Ny fametahana plastika dia misy fitaovana maro mety amin'ny milina, nylon (PApolyamide), PC (polycarbonate), ABS (co-polyacrylonitrile-butadiene-styrene), PMMA (plexiglass, poly Acrylic methyl ester), polytetrafluoroethylene (F-4), epoxy (EP ). Rehefa mifantina fitaovana ho an'ny sary famolavolana, ny plastika injeniera mety dia tsy maintsy voafantina arakaraka ny tontolon'ny fampiasana sy ny fitakiana mifanentana amin'ny ampahany amin'ny milina CNC.
Plastika fikosoham-bary vita amin'ny plastika CNC
Tombony amin'ny faritra vita amin'ny plastika Ouzhan
- Ny plastika dia ambany sy ambany ny lanjany.
- Hery manokana voafaritra sy henjana manokana.
- Fitoniana simika tsara.
- Insulated elektrika tsara.
- Fampihenana ny fikorontanana, fanoherana ny fanoherana ary fanosorana tena.
- Fampisehoana haingo sy fandokoana tsara.
- Fananana fiarovana fiarovana ara-batana sy simika.
- Tsy mora ny mamindra hafanana ary mahomby amin'ny fitehirizana ny hafanana.
- Vidiny famokarana ambany.
OEM namboarina fikosoham-bary fikosoham-plastika orinasa mpamokatra faritra fikosoham-bary plastika Shanghai Shanghai
Ouzhan dia mpamokatra manambatra indostria sy varotra, manome serivisy fanodinana milina tokana sy milina fanodinana. Araka ny fitakian'ny mpanjifa, ny plastika mihosin-plastika avo lenta dia azo alaina. Ireo faritra masinina ireo dia amboarina amin'ny alàlan'ny akora faran'izay tsara kalitao, izay azo avy amin'ireo mpamatsy ampahany marim-pototra fanta-daza eny an-tsena. Ny ekipa teknika matanjaka sy matihanina ary ny rafitra fitantanana mahomby sy miasa dia afaka miantoka ny famokarana tonga lafatra ny milina fitotoana plastika. Ho fanampin'izany, ny vokatra plastika namboarina tamin'ny alàlan'ny plastika vita amin'ny plastika dia azo ekena amin'ny fenitra kalitao ary azo ampiasaina amin'ny fampiharana indostrialy isan-karazany. Ary afaka manome serivisy vidin'ny fifaninanana ho an'ny vokatra fikosoham-bary plastika ho an'ireo mpanjifantsika sarobidy.
Endri-javatra amin'ny faritra fikosoham-bary plastika Ouzhan
Ireo fitaovana ampiasaina amin'ny sangan'asa mazava tsara novokarin'ny zavamaniry fanodinana milina CNC dia mizara ho sokajy roa: metaly sy plastika injeniera. Ny metaly dia misy firaka aliminioma, vy, varahina, firaka matevina maro karazana, sns. Ireo akora mahazatra ao amin'ny zavamaniry fanodinana masinina CNC dia plastika enjeniera ankoatry ny metaly, ary ny akora plastika kosa dia misy akora tsy azo soloina vy.
Tombontsoa amin'ny serivisy fanoratana plastika Ouzhan
- Ny vokatra plastika vita amin'ny cnc rehetra dia iharan'ny fizahana kalitao henjana.
- Araka ny sary na ny santionany amin'ny famokarana ampahany amin'ny fikosoham-bary.
Previous: OEM karbonina fikosoham-bary vy machining faritra
Manaraka: Faritra mihodina amin'ny CNC
Namboarina manokana ny faritra fikosoham-bary vy ...